बेनामी फुटेज फेस्टिवल रिक्याप: फेस्टको सर्वश्रेष्ठ
घर	मनोरन्जन समाचार	बेनामी फुटेज फेस्टिवल रिक्याप: फेस्टको सर्वश्रेष्ठ
by ब्रायना स्पेलिडेनर मार्च 29, 2022
by ब्रायना स्पेलिडेनर मार्च 29, 2022 319 हेराइहरू
बेनामी फुटेज महोत्सव चाँडै मेरो मनपर्ने फिल्म उत्सवहरू मध्ये एक बन्न गइरहेको छ: गत वर्षको 24-घण्टा अनलाइन लाइभस्ट्रिम पछि, यस वर्षको महोत्सव उत्सुकतापूर्वक प्रत्याशित थियो, र निराश भएन। यो COVID प्रतिबन्धहरू हटाएपछि वास्तविक संसारमा फर्किँदा, यसले लाइभस्ट्रिमको उत्कृष्ट प्रस्तुति र विभिन्न स्किटहरूमा के कमी थियो, यसले अतिवास्तविक, प्रयोगात्मक र अनौठो फेला परेका फुटेजहरू र POV डरावनी चलचित्रहरूको तारकीय लाइनअपको साथ बनायो। ।
यस वर्षको छनोट गत वर्षको तुलनामा ठूलो कदम हो, र iHorror यस फिल्म फेस्टिभल कभर गर्न र हामीले देखेका केही उत्कृष्ट चलचित्रहरू हाइलाइट गर्न पाउँदा खुसी थियो। त्यसोभए, यहाँ फेस्ट 2022 मा केहि उत्कृष्टहरू छन्। तपाईंले तिनीहरूलाई जाँच गर्नुपर्छ यदि/जब तिनीहरू वितरित हुन्छन्।
बेनामी फुटेज फेस्टिभल २०२२ मा उत्कृष्ट चलचित्रहरू
यस वर्षको UFF मा मुकुट रत्न थियो बाहिरी पानी, मोजावे मरुभूमि मा एक डरलाग्दो संगीत भिडियो गलत भयो। हामीले यसलाई पहिले नै समीक्षा गर्‍यौं, र यो यस वर्षको सबैभन्दा विचलित चलचित्र हुन सक्छ भन्ने लाग्छ। यस फिल्मलाई के फरक छ यसको लुकाउने छायांकन र क्यामेराको प्रयोग र वास्तविक, डरलाग्दो कथानक हो।
मरुभूमिमा तीनवटा मेमोरी कार्ड फेला परेका छन् जसमा म्युजिक भिडियो खिच्न मरुभूमिमा जाँदै गरेको टोलीको भिडियो समावेश छ। तिनीहरूले केही दिन पछि अनौठो घटनाहरू अनुभव गर्न थाल्छन्: रातमा आकाश उफ्रन्छ, तिनीहरू कम्पनहरू महसुस गर्छन् र चट्टानहरूमा अनौठो आवाजहरू सुन्छन्। यस पछि, एक मनोवैज्ञानिक पीडादायी घटना हुन्छ जसले तपाइँको संवेदनाको परिक्षण गर्नेछ। दुर्भाग्यवश, यो फिल्मको लागि कुनै रिलिज मिति छैन।
बोल्ट ड्राइभर फिल्मको यस्तो अप्रत्याशित आश्चर्य थियो, तर तपाईंले अपेक्षा गर्नुभएका कुनै पनि कारणहरूका लागि होइन। यो मार्टिन स्कोरसेसको आधुनिकीकरणमा इन्सेलको विस्तारित एरिक आन्द्रे शो-एस्क भिडियो डायरी जस्तै पढ्छ। ट्याक्सी चालक.
विवादास्पद सुनिन्छ? हो। यो निश्चित रूपमा सबैका लागि हुनेछैन, कम बजेटको फिल्म निर्माण शैली (पूरै आईफोनमा शूट गरिएको) देखि अन-पीसी विषयवस्तुसम्म, धेरैले यो फिल्मको मजा लिने छैनन्। तर यदि ती चीजहरू छन् जुन तपाईंले व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ, तब यो लो-फाई अतिवास्तविक मास्टरपीस व्यंग्य हो।
बोल्ट ड्राइभरको व्यक्तिगत घोषणापत्र (एक Uber-जस्तो फ्रीलान्सर) जसले आफ्नो वरपरका अरूसँग जडान गर्न गाह्रो महसुस गर्छ। यो निःशुल्क (!) मा हेर्नको लागि उपलब्ध छ Boltdriver.la, त्यसैले निश्चित रूपमा यसलाई जाँच गर्ने विचार गर्नुहोस् यदि तपाईंसँग 42 मिनेट खाली छ भने।
वेसेन्स एक अनौठो फिल्म हो, फेला परेको फुटेजको लागि पनि। फिल्म प्रकृतिमा दार्शनिक छ, र ब्रह्माण्डमा हाम्रो स्थानलाई प्रतिबिम्बित गर्न धेरै समय खर्च गर्दछ। वातावरण काल्पनिक र मनमोहक छ, पूर्णतया अनौठो प्रकाशमा केहि हदसम्म परिचित कथा देखाउँदै।
१ 1960 s० को दशकमा सेट गर्नुहोस्, वेसेन्स एक क्यामेरा चालक दल दक्षिण अफ्रिकी फार्ममा एउटा अनौठो वस्तुको खोजी गर्न बाहिर निस्किएको देखाउँछ जुन त्यहाँ अवतरण भएको थियो कि उनीहरू या त रूसी हतियार वा एलियन हो भन्ने विश्वास गर्छन्।
चलचित्रमा सुन्दर छायांकन छ, र यसले दक्षिण अफ्रिकी खेतबारीको परिदृश्यलाई ईथरिअल तरिकामा खिच्दछ। यो फिल्मको यूएस प्रिमियर थियो, र डेरिक मुलरको निर्देशकीय डेब्यू। दुर्लभ भावनात्मक फेला परेको फुटेज डराउने फिल्म खोज्नेहरू यो देखेर प्रभावित हुनेछन्।
यो फिल्म राम्रोसँग निर्मित, विचलित र रक्तपातपूर्ण फुटेज डराउने फिल्म खोज्नेहरूका लागि उपचार हो। रमाइलो के छ मास्किंग थ्रेसहोल्ड यो एउटा YouTube क्राफ्ट भिडियो जस्तै फिलिम गरिएको छ, हाम्रो नायकको निरन्तर कथनको साथ उसले आफ्नो सेटअप, उसले प्रयोग गर्ने क्यामेराहरू र उसले हासिल गर्ने आशा गरेको छ। एउटै स्थानमा एउटै क्यारेक्टरमा लगभग विशेष ध्यान केन्द्रित गरे तापनि, यो फिल्मले यसको minimalism को ठूलो प्रयोग गर्दछ र सबैतिर संलग्न छ। हामीले यो चलचित्र फ्यान्टास्टिक फेस्ट २०२१ को लागि समीक्षा गर्यौं, त्यसैले हेर्नुहोस् हाम्रो पूर्ण समीक्षा यहाँ।
एक अज्ञात नायकले उसको टिनिटसको विशिष्टताको अनुसन्धान गर्दछ, एक बेहोस बज उसले सधैं सुन्छ। उसले आफ्नो प्रक्रियालाई कागजात बनाउन YouTube भिडियोहरू बनाउने निर्णय गर्छ, र वैज्ञानिक विधिलाई आफ्ना प्रयोगहरूमा लिन्छ, आफ्नो नजिकका विभिन्न वस्तुहरूले उसले सुनेको आवाजलाई परिवर्तन गर्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन्छ।
डरलाग्दो कुरामा पुग्न समय लाग्ने भएतापनि यो मानिसले आफ्नो जुनूनलाई कति टाढा लैजाने हो भनी हेर्नको लागि फिल्म निर्माण प्रविधि, बाध्यकारी कथन र विक्षिप्त जिज्ञासाको साथ सुरुवात अझै रोचक छ। अन्त्य पनि निराश हुँदैन, अविश्वसनीय रूपमा अँध्यारो, विचलित र रक्तपातपूर्ण हुँदै जान्छ। पृथकता, जुनून, सामाजिक चिन्ता र षड्यन्त्रमा फोकसले कोभिड क्वारेन्टाइनको सम्झना दिलाउनेछ।
Putrefixion: नीना Temich को एक भिडियो
यो ३६० डिग्री क्यामेरा प्रयोग गर्ने पहिलो फिचर फिल्म हो। यो एक्लै त्यो तथ्यमा हेर्न लायक छ। कम बजेटमा बनेको यो चलचित्रको सिनेम्याटोग्राफी अचम्मको छ । फिल्मले मेक्सिको सिटीको वातावरणलाई हाइलाइट गर्दछ र ३६० डिग्री क्यामेरा प्रयोग गर्न शरीरको चाल प्रयोग गर्दछ। कथानकले क्यामेराको कामको भव्यतासँग कहिल्यै मेल खाँदैन, यो अझै पनि बेनामी फुटेज फेस्टिवल २०२२ बाट हेर्न लायक छ।
यो चलचित्र नीनामा केन्द्रित छ, मोडेल र नर्तक डालिया जिउकोटलले उनको जीवनको चित्रको रूपमा खेलेको उनको नृत्य र स्केटिङका ​​दृश्यहरू समावेश गरिएको छ। डेभिड टोरेस द्वारा निर्देशित, यो डरलाग्दो विधामा एक अद्वितीय परिप्रेक्ष्यको रूपमा उनी यहाँबाट कहाँ जान्छ भनेर हेर्न पक्कै रोचक हुनेछ।
जान्ड अर्डर महिलाको रूपमा संक्षेप गर्न सकिन्छ ब्लेयर डायन परियोजना, तर बिन्दुमा थप। हो, मानिसहरू जंगलमा हराउँछन्। हो, तिनीहरू एकअर्कालाई धेरै चिच्याउछन्। तर, त्यहाँ पनि न्यानो छन् देखा-पहेलियाँ र पजलहरू जस्तै जुन समूहले नेभिगेट गर्नुपर्छ। पहिलो पटक निर्देशक सारा गोरास पीटरसनबाट, यो फिल्म परम्परागत फेला परेको फुटेज र फ्याँकिएको अजीब पंथ गतिविधिहरूको प्रशंसकहरूको लागि एक उपचार हुनेछ।
यो चलचित्र मोर्गनलाई पछ्याउँछ, एक महिला जसले विश्वास गर्छिन् कि उनको बच्चालाई जान्ड अर्डर भनिने पंथले अपहरण गरेको छ। उनले केही अन्य महिलाहरूलाई जंगलमा गएर आफ्नी छोरी र पंथलाई खोज्न र प्रहरी बलको लागि डकुमेन्ट्री वा प्रमाणको रूपमा रेकर्ड गर्दै खोज्न मनाउँछन्।
म यो चलचित्र राम्रो छैन भनी यो छोटो समीक्षा सुरु गर्न चाहन्छु, तर यसमा बनाइएको एक धेरै रोचक अनलाइन गेम छ र धेरै डरलाग्दो दृश्यहरू छन् जसले काम नगर्ने भागहरूबाट विचलित गर्नेछ।
दुई साथीहरूले 1999 मा एक आपसी साथीसँग छलफल गर्न एकअर्कालाई भिडियो कल गर्नुहोस्, र यो अनौठो, डरलाग्दो पोइन्ट-एन्ड-क्लिक गेम खेल्दै अन्तमा उनीहरूलाई यो खेल कहाँबाट आयो भनेर प्रश्न गर्न थाल्छ।
कतिपय दृश्यहरूले मलाई कत्ति निरुत्साहित बनाएको थियो त्यसले मलाई पसिना बगाएको थियो, र यो फिल्ममा जोडीले खेलेको साधारण फ्ल्यास खेल कत्तिको डरलाग्दो छ भन्ने कुरामा धेरै प्रभावकारी छ, म चाहन्छु कि यो अझ विकसित भएको हो। अन्त्य अलि सन्तोषजनक थिएन र अभिनय सुपर काठको छ, तर बीचका भागहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा डरलाग्दो बनाउँदछ। यदि एक साधारण चलचित्र जुन तपाइँ तपाइँलाई डराउन चाहानुहुन्छ तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ, दिनुहोस् डेडवेयर एउटा प्रयास
बेनामी फुटेज फेस्टिभल हामीलाई नजिक र प्रिय छ, त्यसैले यी अद्भुत चलचित्रहरू जाँच गर्ने विचार गर्नुहोस्। बेनामी फुटेज फेस्टिभलले मे7मा फिल्महरूको फरक लाइनअपको साथ तिनीहरूको चलचित्र महोत्सवको अनलाइन संस्करण पनि राख्नेछ। थप जान्नको लागि तिनीहरू र iHorror सँग राख्नुहोस्।